माधव नेपाललाई कति सजिलो छ पार्टी फुटाउन? | नेपालन्युज
नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएपछि विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको हो।
त्यसो त दुवै पक्ष सम्मलिति कार्यदलले बनाएको दस बुँदे सहमतिमा वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालले असहमति जनाएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन् आक्रमक बनेका हुन्।
एमालेको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २२ जनै सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदा पनि माधव नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बरु कारबाही गरे गरोस् भन्दै उनी पक्षीय सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरु जनाइरहेका छन्।
ओली पक्षीय नेताका अनुसार सम्भवतः आजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २२ जनै सांसदलाई पत्र काट्ने सम्भावना छ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गद्दार गरेका नेपाललाई कुनै पनि हालतमा एमालेमा ठाउँ नरहने बताइसकेका छन्। तर उनीबाहेकका नेताहरुलाई भने पार्टी सहज उपस्थितिका लागि लबिङ गरिरहेको ती नेता बताउँछन्। ओली माधव नेपालबाहेक नेताहरुसँग एकता प्रयास गर्न चाहन्छन्।
एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय संसदमा दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत छैन।
उता माधव नेपालले ओलीले कारबाही गरिहाले के गर्ने भन्नेबारे सत्ता साझेदार पार्टीहरुसँग छलफल चलाइरहेका छन्। सोही क्रममा मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कोटेश्वर पुगेका थिए।
छलफलमा पार्टी फुटाउनका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार रहेको प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए। त्यसका लागि उनले सरकारमा सहभागी हुन नेपाललाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
माधव नेपाल गद्दार हुन्, यस पार्टीमा कहिल्यै स्वागत हुनेछैन : ओली
नेपालले सोबारे आफ्ना पक्षीय नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताएका थिए। नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक अहिले बसिरहेको छ। बैठकले सरकारमा सहभागी हुने नहुने र ओलीले कारबाही गरे कस्तो रणनीति तय गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
मंगलबार प्रचण्डले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार नै पुगेका थिए। करिब ७ महिनापछि बालुवाटार प्रवेश गरेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउवाले समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए।
त्यसो त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै देउवाले नेपाललाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर छुटिन सजिलो बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए। यी घटनाक्रम हेर्नका लागि ओलीले माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरुलाई कस्तो कारबाही गर्छ भन्नेमै सबैको ध्यान रहेको छ।
तर माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो छ?
सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार भर्खर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन। त्यसैले यदि माधव नेपाल नयाँ दल गठन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने नेताहरु बताउँछन्।
बालुवाटारमा भयो देउवा प्रचण्डबीच यस्तो सहमति